Infos vues par les jeunes du 05 mars 2021 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Joela Randiniaina Andriamampionona, à gauche et Antsa Haritiana Andriamanjakamanana, à droite.
Ndao hilaoeky reçoit pour ce vendredi Antsa Haritiana Andriamanjakamanana et Joela Randiniaina Andriamampionona, deux étudiants en Master 1. Ils s’expriment sur les actualités marquantes de la semaine.
- La transformation du marché de Behoririka en China Town
- La photo de la Tortue du Parc de Tsimbazaza : protection de la vie des animaux dans les parcs.
- Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants : quels genres d’émissions ou de productions pour les enfants
- Mars: le mois de la poésie
Studio Sifaka · 2021-03-05 Fandaharana NDAO HILAOEKY - INFOS VUS PAR LES JEUNES
I Andriamanjakamanana Antsa haritiana sy i Andriamampionona Joela Randiniaina, taona fahaefatra eny amin’ny anjerimanontolo no vahinin’ny Ndao hilaoeky amin’ity zoma ity. Haneho hevitra mikasika ireo vaovao nisongadina nandritra ny herinandro izy ireo.
-Famadihana ny tsena Behoririka ho China Town-
-Sarin’ilay sokatra tao Tsimbazaza : fiarovana ny ain’ireo biby anaty valan-javaboahary
-Andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra manome sehatra ny ankizy
-Martsa: Iray volan'ny poezia